गेडागुडी कसरी, कति खाने ? - Nagarik Today
होम » गेडागुडी कसरी, कति खाने ?
रेशादार खाद्य पदार्थको रुपमा समेत चिनिने गेडागुडी हामी हरेक मौसम र अवसरमा खान सक्छौं । वर्षायाममा यो बढी उपयोगी हुन्छ । रेशादार खानेकुराका फाइदाहरु प्रसस्त छन् । रेशादार खाना खाँदा हाम्रो पेट प्राकृतिक रुपले नै सफा हुन्छ । ठूला मान्छेलाई नै यसले कब्जियतबाट जोगाउँछ भने बालबालिकालाई त यो पोषणयुक्त खुराक हुन्छ । यस्ता खानेकुराले उनीहरुको मोटोपनालाई नियन्त्रण गर्न समेत सहज हुन्छ । रेशादार खानेकुरामा क्यालोरी, भिटामिन, खनिज जस्ता तत्व नभए पनि यो बालबालिकादेखि वयष्कसम्मलाई उत्तिकै उपयोगी छ ।
रेशादार खानेकुराले हाम्रो पाचन प्रकृयालाई पनि स्वस्थ राख्न सहयोग पु¥याउँछ । हाम्रो पेटमा हुने आन्द्रालाई प्राकृतिक रुपले नै काम गर्नलाई यो खानेकुराले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यो खानेुकुराको नियमित सेवनले आन्द्रासँग सम्बन्धित समस्या नै उत्पन्न हुँदैन । त्यति मात्र होइन, रेशादार खानाले हाम्रो शरीरको ब्लड सुगरको लेभललाई पनि स्थिर बनाइराख्छ । रगतमा हुने ग्लूकोजको मात्रालाई यसले नियन्त्रण राख्दछ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई खानामा १५ ग्राम तथा ४ देखि ८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई २५ ग्राम रेशादार खाना दिनु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै बालबालिकाहरुलाई सन्तुलित डाइट प्रदान गर्नुपर्छ । त्यस्तो डाइटमा चिल्लो पदार्थ, डेरी प्रोडक्ट, फलफूल, साग–सब्जी, मासु, दाल आदि पर्याप्त मात्रामा समावेश गर्नु पर्छ । यस्ता खाद्य पदार्थबाट शरीरले ग्यालोरी प्राप्त गर्छ ।
healthy foodhealthy lifeगेडागुडी कसरी खाने